ပြည်သူတစ်ဦးချင်းအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများမှလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရလိုသည့်စိတ် ?? - Yangon Media Group
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော် ဆောင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနှင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးရလို သည့်စိတ်များ ပြင်းပြစွာဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရန်လို အပ်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုကြသည်။ ”ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီး သေနတ်သံတွေ တိတ်ဆိတ်သွားဖို့ ငြိမ်သက်သွားဖို့ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးက မဖြစ်မနေ အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတိုင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအပြင် ငြိမ်းချမ်း ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်း ရေးလိုချင်တဲ့ စိတ်ပြင်းပြပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိဖို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်”ဟု ဒဂုံတောင်ပိုင်းမဲ ဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီက ပြောသည်။
ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမသား ချင်းများအနေဖြင့် သွေးစည်းညီညွတ်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေး သည် အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ လွတ် လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် အတိတ်သမိုင်း၏ ဆိုးမွေများအပြင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ အချင်းချင်း နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်း၊ သံသယများပွားကာ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ကျော်ရှိပြီး ယနေ့တိုင် ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းမှုမရှိသေးကြောင်းကိုလည်း နိုင်ငံ တော်သမ္မတက ပြည်ထောင်စုနေ့သဝဏ်လွှာတွင် ထည့် သွင်း ပြောဆိုထားသည်။
”နိုင်ငံတော်က တကယ်သွားချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမို ကရေစီစနစ်ဆိုတာက ပြည်ထောင်စုသားအားလုံးက ယုံယုံ ကြည်ကြည်နဲ့ မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ကြဖို့လဲလိုအပ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်က ကိုယ်တို့နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူညီမျှရေး ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အခြာအာဏာကိုလဲ မပျောက်ပျက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုး ဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ရင် တကယ် သွားချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာက အိပ်မက် လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံး ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုနေ့မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖက်ဒရယ် စနစ်ကို နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရရှိရှိဖြစ်ဖို့အတွက်ကို အကုန် လုံးကို အသိပေးပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကနေ သူသွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြည်ထောင်စုသားအားလုံး တစ်စိတ် တစ်ဝမ်းတည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ ဆောင် ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပန်းဘဲတန်းလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံမှနေ၍ အစိုးရနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိရာ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူ ၅၁ချက်အား ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအဖြစ် ချုပ်ဆိုနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ ”နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ ဦး ဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ချက်ကတော့ ကျွန် တော်တို့အနေနဲ့ မလွဲမသွေရရှိမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်ကို ယုံကြည်တယ်။ ခေါင်းဆောင်ဖြတ်သန်းလာတဲ့သမိုင်းတွေကိုလဲ ယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဆောင် ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် စံထားစရာ တွေပါ”ဟု ဦးညီညီက ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း စတင်ရန် အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းအတွက် စိတ်ဝင်စားမှု အဆိုပြုလွှာ
ရွေးကောက်ပွဲ တစ်နှစ်အလိုမှာ ခြေဥပြင်ဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ NLD
တရားမဝင် သစ်တင်မော်တော်ယာဉ်နှင့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဗန်းမော်မြို့တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
နယူးကာဆယ် အသင်းအနေဖြင့် ကံကြမ္မာ၏ ဖေးမမှုများ ထပ်မံရရှိရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဘင်နီတက်ဇ် ဆို
အာဖဂန်နစ္စတန် အရှေ့ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်သွေးကြွ ၂ဝ အန??
ဖီဖာဆန်ခါတင် စာရင်းတွင်မပါဝင်ခဲ့၍ အပိုဆုကြေး နေမာ မရရှိနိုင်